नेपालमा को’रोनाको नयाँ र खतरनाक लक्षण देखिएको भन्दै डब्लुएचओले दियो ड’रला’ग्दो चे’तावनी! – Nepal Insider
मन्दिरभित्र ब ’ लात्कारपछि ह ’ त्या भएकी सम्झनाको श ’ व उठेन
मुख्य पृष्ठ /समाचार/नेपालमा को’रोनाको नयाँ र खतरनाक लक्षण देखिएको भन्दै डब्लुएचओले दियो ड’रला’ग्दो चे’तावनी!
काठमाडौँ । को’रोना भा’इरसको महामारीबाट विश्व त्रसित बनेको छ। को’रोनाभा’इरसका बारेमा वैज्ञानिकहरुले विभिन्न अध्ययन गरिरहेका छन्। पछिल्लो समयमा वैज्ञानिकले को’रोना भा’इरसको नयाँ र खतरनाक लक्षण देखिएको दाबी गरेका छन्। सुरुवातमा खोकी र ज्वरो मानिएको को’रोना भा’इरसको लक्षण पछि विस्तारै फरक फरक स्वरुमा देखिन थालेको पाइएको छ। पछिल्लो समय विशेषज्ञहरुले को’रोनाभा’इरसका संक्र’मितलाई बोल्न पनि समस्या हुने लक्षण देखिएको बताएका छन्।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका स्वास्थ्य विद्ले को’रोना पोजिटिभ मानिसलाई पछिल्लो सरमय बोल्न नै समस्या हुने लक्षण देखिएको दाबी गरेका हुन्। यस्तो लक्षण देखिएमा तत्कालै चिकित्सकसँग सम्पर्क गर्न पनि उनीहरुले सुझाव दिएका छन्।
को’रोनाका सबै रोगीलाई बोल्न र संवाद गर्न समस्या आएको होइन तर केहीमा यो समस्या देखिएको छ, विज्ञले भनेका छन्। अन्य लक्षण जस्तै यो लक्षण पनि लुकेको हुन सक्छ वा ढिलो गरी आएको हुन सक्छ।
तर कुनै मानिसमा यो लक्षण देखिएमा सावधान हुनुपर्छ।’ बोल्न गाह्रो हुनु भनेको शारीरिक वा मानसिक समस्याको संकेत पनि हुन सक्छ। यसअघि जिब्रोले स्वादको चाल नपाएको र गन्ध थाहा पाउने शक्ति कमजोर भएको लक्षण पनि देखिएको थियो।
यस्तै साढे ४ महिनादेखि फैलिएको को’रोना भा’इरसको महामारीबाट विश्वभर ३ लाख १६ हजार ५१४ जनाको मृ’त्यु भएको छ । यो समाचार तयार पार्दासम्म विश्वका २१३ मुलुक र २ वटा पानीजहाजमा फैलिएको को’रोना भा’इरसको महामारीले ४७ लाख ९८ हजार ४२४ जना सं’क्रमित भएका छन् ।
सं’क्रमितमध्ये १८ लाख ५५ हजार ८१ जना सं’क्रमण मुक्त भएका हुन् । बितेको २४ घण्टामा ३ हजार ६१२ जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने ८१ हजार ४१५ जनामा सं’क्रमण पुष्टि भएको छ । २६ लाख २६ हजार ८२९ जनाको उपचार भइरहेको छ । उपचारारत मध्ये ४४ हजार ८२१ जनाको अवस्था गम्भीर छ ।
सोमबार यो समाचार तयार पार्दासम्म को’रोना भा’इरसकै सं’क्रमणबाट युरोपियन मुलुकहरुमा १ लाख ६२ हजार ८३९ जनाको मृत्यु भएको छ । १७ लाख ८० हजार ७५३ जना सं’क्रमित भएकोमा ७ लाख ६९ हजार ६८२ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । उत्तर अमेरिकी मुलुकहरुमा १ लाख २ हजार ९१४ जनाको मृ’त्यु भएको छ । संक्रमितको संख्या १६ लाख ८३ हजार ४३६ पुगेको छ ।
यस्तै एसियाली मु’लुकहरुमा २४ हजार ७३३ जनाको मृ’त्यु भएको छ । ७ लाख ९८ हजार ३०८ जना संक्रमित भएका छन् । दक्षिण अमेरिकी मुलुकहरुमा २३ हजार २१७ जनाको मृ’त्यु भएको छ । ४ लाख ४० हजार १८२ जना सं’क्रमित भएका छन् ।
अफ्रिकी मुलुकहरुमा २ हजार ७७७ जनाको ज्यान गएको छ भने ८६ हजार ३७६ जना सं’क्रमित छन् । त्यस्तै अष्ट्रेलियासहित ओसिनियाका मुलुकहरुमा ११९ जनाको मृ’त्यु भएको छ । ८ हजार ६४८ जना सं’क्रमित भएका छन् । को’रोना भाइ’रसको महामारीको सबैभन्दा बढी प्रभाव अमेरिकामा परेको छ ।
त्यहाँ ९० हजार ९७३ जनाको मृ’त्यु भएको छ । १५ लाख २६ हजार ८४२ जना संक्र’मित भएका छन् । यस्तै संक्रमितका आधारमा अमेरिकापछि रुसमा सबैभन्दा धेरैमा संक्रमण देखिएको छ । त्यहाँ २ लाख ८१ हजार ७५२ जना सं’क्रमित भएका छन् भने २ जहार ६३१ जनाको मृ’त्यु भएको छ ।